အကောင်းဆုံး စိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ်၊ စီးပွားဖြစ် ဖန်လုံအိမ် လုပ်ငန်းရှင်များ | Shengqiang
အပြည့်အဝ Turnkey တစ်ခုတည်းသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ် ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ခံစားနိုင်ပါစေ။
Light Deprivation ဖန်လုံအိမ်
Polycarbonate Sheet ဖန်လုံအိမ်
Shengqiang ဖန်လုံအိမ်သည် သင့်အား Turnkey တစ်နေရာတည်းတွင် ကျွမ်းကျင်သော ဝန်ဆောင်မှုကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်ပါစေ။
18+ အတွေ့အကြုံရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ် ပေးသွင်းသူ။
ဖန်လုံအိမ်စိုက်ပျိုးရေးဆိုသည်မှာ ဖန်လုံအိမ်ဂေဟစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သီးနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ Shengqiang ဖန်လုံအိမ်စိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ်ထုတ်လုပ်သူများသည် သင့်အား အကောင်းဆုံး ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်၊ ဖန်လုံအိမ်၊ ပိုလီကာဗွန်နိတ်စာရွက် ဖန်လုံအိမ်နှင့် ဖန်လုံအိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖန်လုံအိမ် စိုက်ပျိုးတဲ သည် အပူ-သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိဘောင်၊ အကာအရံပစ္စည်းများကို 4-5 မီလီမီတာ အရည်အသွေးမြင့် float glass သို့မဟုတ် tempered glass၊ ဖန်နှစ်ထပ် : 4+6+4mm,5+6+5mm.အလင်းပို့လွှတ်မှု 90% ထက် ပိုကြီးသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖောက်သည်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ကာဗာပစ္စည်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ဖန်လုံအိမ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းနဲ့ ဖန်သားပြင်ကို အထူးအလူမီနီယမ်နဲ့ ဝန်းရံထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု1.အရိုးစုကို အအေးလှိမ့်ထားသော စတုဂံစတီးပြွန်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။2. ဖန်လုံအိမ်အား အတွင်းပိုင်းကဲ့သို့သော လိုအပ်သောစနစ်ဖြင့် စုစည်းနိုင်သည်။&အပြင်ဘက်အရိပ်စနစ်၊ ဘေးဘက်&ခေါင်မိုးလေဝင်လေထွက်စနစ်၊ အပူပေးခြင်း&အအေးပေးစနစ် စသည်တို့၃။အဖုံးဖုံးပစ္စည်းများတွင် အခေါင်းပေါက်မှန် နှစ်မျိုးပါဝင်ပါသည်။သတ်မှတ်ချက်များမှာ 4mm+9mm+4mm နှင့် 5mm+6mm+5mm တို့ဖြစ်သည်။4. ဤဖန်လုံအိမ်အမျိုးအစားသည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ အများအားဖြင့် ပန်းနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနဖန်လုံအိမ်၊ ဂေဟဗေဒစားသောက်ဆိုင်ဟိုတယ်၊ ပန်းစျေးကွက်၊ ရှုခင်းခင်းကျင်းပြသခြင်းနှင့် ပျိုးပင်မွေးမြူခြင်းအတွက် အသုံးများသည်။
Multi-span ပလပ်စတစ်ဖလင်ဖန်လုံအိမ်သည် ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့် ပန်းများ စိုက်ပျိုးရာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်လျော်သောအလင်းရောင်၊ အစိုဓာတ်နှင့် အပူချိန်အခြေအနေများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အထွက်တိုးစေကာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို တွန်းလှန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပြဋ္ဌာန်းချက်အား ရှေ့သို့နောက်ပြန်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် တောင်းဆိုမှု၏ ကွဲလွဲမှုများကို စွန့်လွှတ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပလပ်စတစ် ဖန်လုံအိမ်
ဖန်လုံအိမ်၏ အကျယ်အဝန်းအများစုမှာ ၈ မီတာ ကျယ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကဖွဲ့စည်းပုံမှာပူ-သွပ်ရည်စိမ်ပိုက်များနှင့်ပရိုဖိုင်း။ အပေါ်နှင့်ပတ်လည်သည် 8mm အကျယ်ရှိသော multi-span ဖန်လုံအိမ် သို့မဟုတ် PC ဘုတ်၏ အထူး PO ဖလင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ transmittance နှင့် insulation သည်အလွန်စုံလင်သည်။ ၎င်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင် အပြင်ဘက်နှင့် အတွင်းပိုင်းအရိပ်ပေးစနစ်အပြင် အတင်းအကြပ် ပန်ကာအအေးပေးစနစ်၊ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်၊ နှင်းစုပ်သည့်စနစ်၊ ထိုင်ခုံတန်းလျားများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ဖန်လုံအိမ်၏ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော လျှပ်စစ်လက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည်။arch greenhouse ကို ပန်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပန်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်ပင်များအတွက် ငါးပုစွန်ဖန်လုံအိမ်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ တန်ဆာဆင်ထားသော ဖန်လုံအိမ်အနေဖြင့် ၎င်းကို ဂေဟဗေဒစားသောက်ဆိုင်၊ ပြပွဲ၊ ခရီးသွားနှင့် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမှုများအပြင် ရေနေသတ္တဝါနှင့် တိရစ္ဆာန်များ၏ ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
စျေးပေါသော စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖန်လုံအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးယဉ်ကျေးမှု ပိုလီဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ဖန်လုံအိမ်များ ဖန်လုံအိမ်များSingle span ပလပ်စတစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းအတွက် အလွှာသုံးလွှာဖြင့် ပူသောသွပ်ရည်စိမ်ပိုက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဖရိန်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။
Qingzhou Shengqiang ဖန်လုံအိမ်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ Co.Ltd. “Quality First, Customer First” ၏ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ကို လိုက်နာပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် ဖန်လုံအိမ်ဒီဇိုင်းနှင့် သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင် ဖန်လုံအိမ်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ 18 နှစ်ကျော်ဖြင့် ဧရိယာ 40000 စတုရန်းမီတာကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
အဓိကထုတ်ကုန်များ: ပိုလီကာဗွန်နိတ်စာရွက် ဖန်လုံအိမ်၊ ဖန်လုံအိမ်၊ ဘက်စုံရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်၊ ပန်းဖန်လုံအိမ်၊ ပန်းဖန်လုံအိမ်၊ ရေအားလျှပ်စစ် စိုက်ပျိုးဖန်လုံအိမ်၊ မွေးမြူရေး ဖန်လုံအိမ်၊ စိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ်၊ စီးပွားဖြစ် ဖန်လုံအိမ်၊ မျိုးစေ့ထုတ်ဖန်လုံအိမ်၊ တစ်ခုတည်းသော ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်၊ မိသားစုဥယျာဉ် ဖန်လုံအိမ်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါရှိသော ဖန်လုံအိမ်စနစ်။
ကူဝိတ်ရှိ စိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ် ဘက်စုံ ရုပ်ရှင် ဖန်လုံအိမ် ပရောဂျက်များ
ကူဝိတ်ရှိ စိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ် ဘက်စုံ ရုပ်ရှင် ဖန်လုံအိမ် ပရောဂျက်များတရုတ် စီးပွားဖြစ် ဖန်လုံအိမ် ထုတ်လုပ်သူ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၏ ယုံကြည်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကူဝိတ်မှာ ဖန်လုံအိမ် ဖန်လုံအိမ် ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဖန်လုံအိမ်များကို သင်ရနိုင်သည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဖန်လုံအိမ်စက်ရုံသည် ဖန်လုံအိမ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် 10 နှစ်ကျော်ကြာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာများစွာရှိသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ စိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ် စက်ရုံသည် သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝယ်ယူမှု အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းရန် ပရောဂျက် ဒီဇိုင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပရောဂျက် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ ရှိသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ဖောက်သည်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ဖောက်သည်များအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပရိုဂရမ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ပါသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသုံး ဖန်လုံအိမ်စက်ရုံသည် တစ်နှစ်အာမခံ ပေးထားသည်။ အာမခံကာလပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖန်လုံအိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရန်အတွက် အသင့်လျော်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
အခမဲ့ဒီဇိုင်းရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။